မင်္ဂလာသက်တမ်း (၇) နှစ်ပြည့်နေ့လေးမှာ အမှတ်တရစကားလေး ပြောပြလာတဲ့ Nကိုင်ရာ – Cele Posts
မင်္ဂလာသက်တမ်း (၇) နှစ်ပြည့်နေ့လေးမှာ အမှတ်တရစကားလေး ပြောပြလာတဲ့ Nကိုင်ရာ
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆို တော် Nကိုင်ရာ ကတော့ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ကိုဘုန်းအောင် နဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့မှာ မင်္ဂလာသက်တမ်း (၇) နှစ်ပြည့် ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ မင်္ဂလာသက်တမ်း အမှတ်တရနေ့လေး အတွက် Nကိုင်ရာက အခုလို ပြောခဲ့ပါတယ်။
” ဒီဘီးကြဲနဲ့ ဆုံခဲ့တာ ၉နှစ်၊ ဒီဘီးကြဲနဲ့ ဘဝတစ်ခု စခဲ့တာ ၇နှစ်၊ အချိန်တွေက မြန်လိုက်တာဆိုပြီး ကြည့်လိုက်ရင် အသဲပုတူး နှစ်ယောက်တောင် ရှိနေပြီ။ ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်…. fighting ပါ ယောင်ပူး. Happy Anni” ဆိုပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ ည ၇နာရီက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
N ကိုင်ရာဟာ ” မဝေးတဲ့ ချစ်ခြင်း” ၊ ” သိမ်းထားခွင့်” ၊ ” ကိုယ်မညာတော့ဘူး” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတွေနဲ့ ဂီတ လောကမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ် ပါတယ်။ အချစ်သီချင်းအေး အေးလေးတွေ ကိုသာ အမြဲတမ်း သီဆိုတတ်တဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်အများဆုံး ရရှိထားတဲ့ အမျိုးသမီး အဆိုတော်တွေထဲက တစ်ဦး အပါအဝင်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အခုဆိုရင်တော့ သူမဟာ ဂီတသက်တမ်း (၁၀) နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
N ကိုင်ရာဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုဘုန်းအောင်နဲ့ ချစ်သူ သက်တမ်း (၂) နှစ်အကြာမှာ လက်ထပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၄ ခုနှစ် မှာတော့ သူတို့ နှစ်ဦးဟာ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှာပဲ ကချင်ရိုးရာ အတိုင်း မင်္ဂလာဆောင် ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ အသက် (၄) နှစ်ကျော်အရွယ် သားလေးနဲ့ ၂ နှစ်ကျော် အရွယ် သမီးလေး တစ်ဦးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင်း ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဂီတအလုပ်တွေနဲ့ အနည်းငယ် ဝေးကွာနေပြီဖြစ်တဲ့ N ကိုင်ရာ ကိုတော့ အခုချိန်ထိ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကလည်း အများကြီး ရှိလို့နေပါတယ်။
မင်ျဂလာသကျတမျး (၇) နှဈပွညျ့နလေ့ေးမှာ အမှတျတရစကားလေး ပွောပွလာတဲ့ Nကိုငျရာ
ပရိသတျကွီးရေ အဆို တျော Nကိုငျရာ ကတော့ ခငျပှနျး ဖွဈသူ ကိုဘုနျးအောငျ နဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ (၁၄) ရကျနမှေ့ာ မင်ျဂလာသကျတမျး (၇) နှဈပွညျ့ ခဲ့ပွီလို့ သိရပါတယျ။ မင်ျဂလာသကျတမျး အမှတျတရနလေ့ေး အတှကျ Nကိုငျရာက အခုလို ပွောခဲ့ပါတယျ။
” ဒီဘီးကွဲနဲ့ ဆုံခဲ့တာ ၉နှဈ၊ ဒီဘီးကွဲနဲ့ ဘဝတဈခု စခဲ့တာ ရနှဈ၊ အခြိနျတှကေ မွနျလိုကျတာဆိုပွီး ကွညျ့လိုကျရငျ အသဲပုတူး နှဈယောကျတောငျ ရှိနပွေီ။ ရှဆေ့ကျဖို့အတှကျ…. fighting ပါ ယောငျပူး. Happy Anni” ဆိုပွီးတော့ ဇနျနဝါရီလ ၁၄ ရကျနေ့ ည ရနာရီက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
N ကိုငျရာဟာ ” မဝေးတဲ့ ခဈြခွငျး” ၊ ” သိမျးထားခှငျ့” ၊ ” ကိုယျမညာတော့ဘူး” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးတှနေဲ့ ဂီတ လောကမှာ အောငျမွငျမှု ရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုတျော တဈဦးဖွဈ ပါတယျ။ အခဈြသီခငျြးအေး အေးလေးတှေ ကိုသာ အမွဲတမျး သီဆိုတတျတဲ့သူ ဖွဈတာကွောငျ့ မိနျးကလေး ပရိသတျအမြားဆုံး ရရှိထားတဲ့ အမြိုးသမီး အဆိုတျောတှထေဲက တဈဦး အပါအဝငျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ အခုဆိုရငျတော့ သူမဟာ ဂီတသကျတမျး (၁၀) နှဈရှိပွီဖွဈပါတယျ။
N ကိုငျရာဟာ ခငျပှနျးဖွဈသူ ကိုဘုနျးအောငျနဲ့ ခဈြသူ သကျတမျး (၂) နှဈအကွာမှာ လကျထပျခဲ့ တာဖွဈပါတယျ။၂၀၁၄ ခုနှဈ မှာတော့ သူတို့ နှဈဦးဟာ ကခငျြနှဈခွငျး ခရဈယာနျဘုရားကြောငျးမှာပဲ ကခငျြရိုးရာ အတိုငျး မင်ျဂလာဆောငျ ခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျတော့ အသကျ (၄) နှဈကြျောအရှယျ သားလေးနဲ့ ၂ နှဈကြျော အရှယျ သမီးလေး တဈဦးကို ပိုငျဆိုငျထားရငျး ပြျောစရာကောငျးတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ဖွတျသနျးနတော တှရေ့ပါတယျ။ ဂီတအလုပျတှနေဲ့ အနညျးငယျ ဝေးကှာနပွေီဖွဈတဲ့ N ကိုငျရာ ကိုတော့ အခုခြိနျထိ အားပေးတဲ့ ပရိသတျတှေ ကလညျး အမြားကွီး ရှိလို့နပေါတယျ။
မွေးနေ့၊ မွေးလတူ ချစ်သမီးလေး နှစ်ယောက်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင်လေး ပေးခဲ့တဲ့ ဂရေဟမ်
သူမတို့အတွဲလေး စကြိုက်တဲ့အချိန်ကတည်းက လူတစ်ချို့ရဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေများစွာကို ကြုံတွေ့လာခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ၀မ်းနည်းစွာ ဖွင့်ဟလာတဲ့ နေဒွေးရဲ့ ကောင်မလေး